မင်္ဂလာတရားတော်အတွက်ဆုတောင်းပါ။ ? အံ့သြဖွယ်ရာနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုတောင်းခံရန်မြတ်နိုးခြင်း
မင်္ဂလာရှိဆုတောင်းရန် ဒါဟာကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်း၌များသောအားဖြင့်အစဉ်အမြဲပြုသည့်ဝတ်ပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်သူအားလုံးကဒီဆုတောင်းချက်တွေကိုသိသင့်တယ်။
ဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့ကိုမလုပ်သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေသောအရာသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးအလေးအနက်ထားသင့်သည်ဟုနှလုံးသားထဲမှစစ်မှန်သောခံစားချက်ဖြင့်သတိပြုပါ ။
ကရာနီလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်လူသားများအတွက်သူစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ရန်ဤဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
2 ၁။ အသန့်ရှင်းဆုံးသက်သက်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း
3 ၂။ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုတောင်းခံရန်အသန့်ရှင်းဆုံးဆုတောင်းခြင်း
4 ၃။ အသန့်ရှင်းဆုံးယဇ်ပလ္လင်စက္ကမင်မင်္ဂကိုချီးမွမ်းရန်ဆုတောင်းခြင်း
5 အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ထံဆုတောင်းပါ
“ ထာဝရအဘ၊ ငါမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် infinito ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ အိုအဘ၊ ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ဆိုင်းပေးခဲ့သောသင်၏ကြီးမားလှသောစိတ်ရှည်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်ကိုသနားကရုဏာစိတ် ရှိ၍ မတိုင်းတာနိုင်သောကရုဏာတော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဘုရား။ ငါပေးသမျှသောဆုကျေးဇူးတော်ကိုငါပြန်ပေးစေခြင်းငှါ၊
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်ရှေ့မှောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မီးမလောင်နိုင်သောမီးဖြစ်ပြီးသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ရှိနေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အမှားများကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်း၌အားသစ်လောင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အားချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကြည်ညိုလေးမြတ်ခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိုပါသည်။
သခင်ယေရှုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရှေ့မှောက်၌ ရှိ၍ မရေမတွက်နိုင်သောနှလုံးသားကိုသင်၏ဘုရားသခင့်နှလုံးသားမှဆွဲထုတ်ချင်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်နှင့်လူအားလုံးအတွက်၊ သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်း၊ အိုသခင်ယေရှု၊ ဤအချိန်များသည်အမှန်တကယ်ရင်းနှီးသောအချစ်များ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများဖြစ်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်အားဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသောကျေးဇူးတော်အားလုံးကိုလက်ခံရရှိရန်ကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ထားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနာရီ။
အပျိုစင်မာရိ၊ ဘုရားသခင့်မယ်တော်နှင့်အမေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းပြီးသင်၏စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောနှလုံးသားမှခံစားခွင့်တောင်းပါ။
အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ပါတကား။ ငါယုံကြည်တယ်ငါကိုးကွယ်တယ်၊ မျှော်လင့်ပါတယ်ချစ်တယ်ငါချစ်တယ် မယုံကြည်သူ၊ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ မစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်သင့်ကိုမချစ်သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်။
အသန့်ရှင်းဆုံးသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ အဖေ၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်၊ ငါမင်းကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ပယောဂတွေအားလုံးမှာရှိနေတာ၊ ငါတို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောကိုယ်ခန္ဓာ၊ သွေး၊ စိတ်ဝိညာဉ် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများနှင့်လျစ်လျူရှုခြင်းသည်သူကိုယ်တိုင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောနှလုံးသားနဲ့ Mary ရဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့အဆုံးမရှိတဲ့ကောင်းချီးတွေကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အပြစ်သားတွေပြောင်းလဲဖို့ငါမင်းကိုတောင်းဆိုပါတယ်။ "
အသန့်ရှင်းဆုံးမှကိုးကွယ်ခြင်း၏ပဌနာ စိတ်နှလုံးထဲကနေပြီးပြည့်စုံလက်နက်ချပြသသည်ထို့ကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအရာတစ်ခုခုကိုတောင်းခံခြင်းမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၌သွန်သင်ထားသည့်အတိုင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးအရှက်ရသည့်နှလုံးဖြင့်ထိုက်တန်သူအားသာကျွန်ုပ်တို့နှလုံးကိုအပ်နှံလိမ့်မည်။
စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ပြုသောအမှုနှင့်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကိုးကွယ်ခြင်းသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်တွင်အလွန်တန်ခိုးပါသောလက်နက်ဖြစ်သည်။
ငါတို့အားလုံးနှင့် ၀ ိညာဉ်၏ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ
ချီးမွမ်းခြင်းသည်နှလုံးသားမှပြုလုပ်သောချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလူနှင့်တူသောသူမရှိကြောင်းသိခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည်ချစ်တော်မူသောအရှင်၊ သူသည်နာကျင်မှုနှင့်နှိမ့်ချမှုကိုခံရပ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့တွင်သူ၌စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုကိုခံစားကြရသည်။
အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ထံဆုတောင်းပါ
"အိုမြင့်မြတ်သောယေရှု ညဉ့်အခါ၌သင်သည်များစွာသောတဲတော်တို့၌မင်း၏တိရစ္ဆာန်များကိုအကြည့်အရှုမရှိ၊ အထီးကျန်ဆန်စွာအထီးကျန်ဆန်နေမည်။
ငါနင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုနွေးထွေးစေပြီးသူ့ရဲ့စည်းချက်မှုတွေအားလုံးဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကြည်ညိုလေးစားမှုတွေလိုပဲလိုချင်နေတယ်။ အိုဘုရားသခင်၊ စက္ကမင်မင်္ဂမျိုးစိတ်များအောက်တွင်အမြဲနိုးနိုးကြားကြားရှိနေပြီးကိုယ်တော်၏ကရုဏာတော်သည်အပြစ်သားများအပေါ်စောင့်ကြည့်နေခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှအိပ်မပျော်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုလောင်သောမီးခွက်ကဲ့သို့ပြုပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အစဉ်အမြဲချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လောင်ကျွမ်း။ စောင့်ကြည့်ပါ ဦး! ဘုရားသခင့ကင်းစောင့်!
ပျောက်ဆုံးနေသောဝိညာဉ်များ၊ ပျောက်ဆုံးနေသူများ၊ မသေဆုံးသောညများ၌သင်၏ခွန်အားနှင့်နှစ်သိမ့်မှုလိုအပ်သည်၊ သေခြင်းအတွက်၊ သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအစေခံသော်လည်းစိတ်မပျက်ဘဲနွေးထွေးသောသင်၏ကျေးကျွန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန် မင်းရဲ့တဲတော်ကနေ ... မင်းနေတဲ့ည၊
ယေရှု၏မြင့်မြတ်သောနှလုံးသားသည်ကမ္ဘာတစ် ၀ ှမ်းရှိနေရာအားလုံး၌ကောင်းချီး၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ မြတ်နိုးခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်းနှင့်ရိုသေခြင်းခံရပါစေ။ အာမင်။ "
အိပ်ရာမ ၀ င်မီ ၀ ိညာဉ်တော်၏ ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ဆုတောင်းခြင်းသည်ဆုတောင်းခြင်းအရှိဆုံးအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မအိပ်ခင်ဆုတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ် သို့မဟုတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာငြိမ်သက်မှုရှိစေရန်အထူးသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ထံဆုတောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်ရာမ ၀ င်မီအသန့်ရှင်းဆုံးသောစက္ကမင်မင်္ဂသို့ဆုတောင်းခြင်းသည်နေ့စဉ်လုပ်သင့်သောအရာဖြစ်ပြီးကလေးများကိုဤအလေ့အကျင့်ကိုသင်ကြားပေးခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
En la iglesia católica esta es una de las oraciones más importantes ya que fortalece la fe del ခရစ်ယန်ဘာသာ y fortalece el espíritu.
၎င်းသည်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည် မှတ်မိခြင်း, ချီးမွမ်းကြလော့ y ယေရှုကိုးကွယ်သည် နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဘို့မိမိယဇ်။ ဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုအမြဲတမ်းအကျိုးရှိစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်သင့်အားငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်ဝစေပြီးသခင်ဘုရားနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်လိုအပ်သည်။
အဖြေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါသည်ဆုတောင်းသောအခါဖယောင်းတိုင်ထွန်းနိုင်လျှင်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းကိုအချိန်မရွေး၊ အချိန်မရွေးပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖယောင်းတိုင်ကိုအမြဲတမ်းမီးမဖွင့်နိုင်ပါ။ ယုံကြည်သူများစွာသည်များသောအားဖြင့်ဝတ်ပြုရေးအတွက်ပူဇော်သည့်အခါဖယောင်းတိုင်များရှိသည့်သူတို့၏သန့်ရှင်းသူတို့အတွက်အထူးယဇ်ပလ္လင်များပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
အမှု၌ ဆုတောင်းပဌနာ၏ နှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလုပ်ရပ်တိုင်းသူတို့နှင့်အတူလုပ်သောယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ကြောင့်သူတို့၏ထိရောက်မှုတည်ရှိသည်သောကွောငျ့။